Home Wararka MW Deni oo lagu qasbay inuu ogolaado in lagu tartamo kuraasta Golaha...
MW Deni oo lagu qasbay inuu ogolaado in lagu tartamo kuraasta Golaha Shacabka ee Mudug
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni iyo Isimada Beesha Cumar Maxamuud oo xalay ku kulmay Madaxtooyada Garoowe ayaa ugu danbeeyntii ogolaaday in kuraasta Golaha Shacabka ee Hop#198 iyo Hop#199 si furan loogu tartamo.
Labada dhinac ayaa ku heshiiyay in tartan furan laga dhigo Kuraasta Hop#198 iyo Hop#199 si waafaqsan Habraaca Doorashada dadban ee Golaha Shacabka Baarlamanka Federaalka Soomaaliya.
Isimada ayaa habeen ka hor Madaxweynaha u gudbiyay Go’aankooda la xiriira in aan cid gaar ah loo xirin Kuraasta balse tartan furan loo galo si loo ilaaliyo hufnaanta Doorashada.
Madaxweyne Deni oo markii hore doonayay in shakhsiyaad loo xiro Kuraastaas ayaa sida la sheegay ku qancay Go’aanka Isimada islamarkaana la qaatay in tartan laga dhigo Doorashada.
Previous articleAl Caddaala oo hambalyo hordhac u diray Odowaa
Next articleMareykanka oo qoraal ka soo saaray cida fududeysay weerarkii Al Shabaab ku qaaday saldhigooda
Faahfaahin dheeri ah oo kasoo baxeysa Qarax culus oo lala eegtay...
Ciidan ka goostay dowladda oo u galay Shabab